” Daqiiqado ka hor ayuu xiriir ila soo sameeyay mid kamid ah Ragii isku qarxiyay Maxkamada Gobolka ” Al Amrikiyah – idalenews.com
Abuu Mansuur Al Amriiki oo kamid ah Saraakiisha shisheeye ee Alshabaaab ayaa shaaca ka qaaday in mid kamid ah Ragii isku qarxiyay Maxkamada Gobolka Banaadir uu xiriir la soo sameeyay ka hor inta uusan is qarxin.
Abuu Mansuur ayaa Bogiisa Twitter waxaa uu ku shaaciyay in mid kamid ah Ragii isku qarxiyay uu xiriir la soo sameeyay ka hor inta uusan is qarxin, iyadoo Ninkaasi la soo xiriiray looga shakisan yahay Wiil Soomaali Canadian ah.
Wuxuu sheegay inuu kula dardaarmay inuu joojiyo khilaafka kala dhexeeya isaga iyo masuuliyiinta sare ee Alshabaab, una hogaansamo awaamiirta madaxda sare ee Alshabaab oo haatan khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo Abuu Mansuur Al Amriiki.
Cumar Xamaami oo Alshabaab ay u yaqaanaan Abuu Mansuur Al-amriiki ayaa sheegay in wiilkaasi ka hor inta uusan is qarxin uu dar daaran kooban siiyay, kana codsaday inuu dhameeyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo masuuliyiinta Alshabaab, waxaana wiilkaasi looga shakisan yahay Mahad Cali Dhoore oo ah Soomaali Canadian, sida ay sheegayaan wararka hordhaca ah.
Abuu Mansuur isaga ma sheegin waxa uu ugu jawaabay wiilka u soo jeediyay codsigaasi, balse wuxuu xaqiijiyay in wikaasi uu la hadlay ka hor inta uusan is qarxin.
Qaraxii iyo Weeraradii ka dhacay xarunta Maxkamada Gobolka Banaadir ayaa waxaa ka dambeeyay kooxda Alshabaab, waxaana qaraxyadaasi ka qeyb qaatay wiil Soomaali Canadian ah oo ka tirsanaa xarakada Alshabaab.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo geedo talaalaya kuna celiyay in dhoofinta dhuxusha ay danbi weyn tahay.